MASSOB kwupụtara Mee 30 ka ọ bụrụ 'ụbọchị Biafra'
Ndị otu akpọrọ akpọrọ 'Biafra Day' bụ Biafra akpọrọ 'Movement for Actualization of the Nation of Biafra' nke Biafra MASSOB. Ndị otu a kọwapụtara na a gaghị eme ya, mana ha rịọrọ ahịa niile, ụlọ akwụkwọ, ụlọ akụ, na ụlọ ọrụ gọọmentị ndị ọzọ n'ala Biafra ka ha nọrọ otu ebe iji gosi nkwanye ugwu maka ala nna ha.
Nke a dị n'akwụkwọ onye isi mgbasa ozi ha bụ Samuel Edeson wepụtara, nke òtù ahụ mere ka o doo anya na o mere mkpebi a ka e mechara nzukọ mba ya n'isi ụlọ ọrụ MASSOB dị n'Enugwu, bụ mgbe ọ siri ọnwụ na -echeta ụbọchị Biafra na Mee 30 n'ihe banyere iwu emume nke onye nwuru anwu na onye ndu Biafra, Dim Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu.
Ọ gara n'ihu kwuo na Ojukwu kwusara Republic of Biafra na Mee 30th, 1967, site na nkwenye zuru oke na nkwado zuru oke nke ndị okenye na ụmụ amaala Biafra, na otu ahụ achọghị ịme ncheta ncheta na ụbọchị ọbụla karịa Mee. Nke 30, nke ọ kọwara dị ka ihe dị nsọ na akụkọ ntolite Biafra.
“Iwu nke nnukwu onye ndu anyị, General Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, ga-enwerịrị ekworo na nkwupụta okwu siri ike; mgbalị ọ bụla ịgbanwe ya site n'aka ndị na-enwe nkụda mmụọ ga-eguzogide oke, "nkwupụta ahụ kwuru. “Ndị Biafra ga-eme mmemme ncheta afọ a ọ bụghị dịka otu na-akwado Biafra, mana iji gosi nsọpụrụ na nsọpụrụ nye ala nna anyị,
Ha gwara Biafra ka ha mee ekpere pụrụ iche na ịrịọ arịrịọ ike maka ndị dike ha niile nwụrụnụ, ma gbaa ndị obodo ha ume ka ha kwadebe maka ihe ha kọwara dị ka nnukwu ncheta na ncheta nke mgba ha.
Biafra: Anyi choro referendum, IPOB ekwughi UK govt April 21, 2021
Kpọọ aha ndị na-ekwu maka Biafra na ụgwọ ọnwa gị, IPOB gwara Federal Government of Nigeria April 23, 2021
Otu 52 nọ na mgbago ugwu rịọ United Nations na ndị ọzọ ka ha kwado mgbaghara Biafra April 28, 2021
Biafra nwere mpaghara Bakassi Peninsula, anyị dịkwa njikere ibuso ndị agha Naịjirịa na ndị Kamerun agha - BNL Nwere ike 3, 2021
Naịjirịa Agaghị Agbaji, TB Joshua, Pro-Biafra, Yoruba Agitators Na-ewe Iwe Nwere ike 10, 2021
Biafra Already Go, Oduduwa Republic, Buhari enweghị ike ịkwụsị ha - Pastor Giwa April 22, 2021
Bobrisky kwupụtara na ya bụ nwanyị, na-ekwu na ya ewepụla akụkụ ahụ ya Nwere ike 3, 2021
Tags:n'ihe banyere, massob